Fomba 30 hampiarahana ny fiainanao indray mandeha sy ho an'ny rehetra - Blog
Fomba 30 hampiarahana ny fiainanao indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Mety hasiaka ny fiainana. Marina marokoroko, indraindray.
Mety hahatsapa fa sahirana ianao mahazo ny fofonainao.
Nandiso fanantenana anao ny olona, ​​nivily lalana ny drafitra, ary ny nofinofy dia mety hikatso noho ny adin-tsaina sy ny savorovoro rehetra.
Tsy midika izany fa mila mijanona ho lasibatry ny toe-javatra ianao na mamela ny fiainanao handalo anao!
Azonao atao ny misambotra ny fandraisana andraikitra, mahita ny fiadananao sy ny fahasambaranao ary manenjika izay tadiavinao.
Noho izany, ndao hiresaka momba ny fomba hampiarahana ny fiainanao indray mandeha!
1. Miresaka, fa aza mitaraina intsony.
Ity ny zavatra tsy holazain'ny olona aminao - mihaino olona mimenomenona tsy an-kijanona momba ny fiainany na ny toerany no lany andro, fandaniam-potoana matetika, ary manimba anao any aoriana.
Amin'ny ankapobeny ny olona dia mitady izay ho afovoany ary miondrika am-panajana izy ireo ary miteny hoe: 'Ratsy loatra izany.' satria ny sakaizany dia mitaraina ny amin'ny toe-javatra misy azy ireo mandritra ny fotoana faharoa-polo.
… Ary tsy misy zavatra sarobidy azo tanterahina.
Midika ve izany fa tsy tokony hiresaka momba ny olanao mihitsy ianao?
Aza hadino anefa ny milaza ny antony itenenanao voalohany.
- Hiresaka fotsiny ve ianao?
- Ianao ve manandrana manodina ny fihetsem-po mifandraika amin'ilay olana mahazo anao?
- Mitady vahaolana ve ianao?
Betsaka ny hafatra ao amin'ny sehatry ny fanatsarana ny tena sy ny fahasalamana ara-tsaina milaza aminao hiresaka momba ny zavatra tsapanao.
Saingy tsy torohevitra tsara foana izany.
Amin'ny psikolojia, ny fivezivezena dia rehefa mandehandeha miverimberina ireo zavatra ratsy eo amin'ny fiainany ny olona iray, izay mahatonga azy ireo hihodinkodina lalindalina kokoa amin'ireo olany.
Ny fanaovana tsinontsinona ny olanao dia mety hampitombo ny fahaketrahana, ny tebiteby ary hiteraka fihenjanana fanampiny.
Ary izany no tena marina fa ny fitarainana tsy misy tanjona manorina dia.
Na ahoana na ahoana, manafaha rivotra raha mila mandroso ianao, saingy tadidio fa ny olona manodidina anao dia manana ny olana mahazo azy ihany koa.
Hamarino tsara fa eo izy ireo ho azy ireo, na ho hitanao fa manjavona izy ireo.
Ary izany dia lesona mampalahelo, tsy mahafinaritra hianarana amin'ny fomba sarotra.
2. Ataovy mavitrika ny fiainanao fa tsy mihetsika.
Mangataka andro ve ianao?
Betsaka ny olona manao an'izany.
Nahemorinay rahampitso izay azontsika atao anio!
Ny olana amin'ny fanemorana dia manome anao fotoana hanadinoanao hanao zavatra manan-danja izany na mamela azy ireo hanangona mandra-pahatongan'ny olan'ny olana iray lasa tendrombohitra.
Ary avy eo dia mijanona mikorisa ianao mba hiezaka ny hampifanaraka ny zavatra rehefa miatrika ireo olana fanampiny nateraky ny tsy fihetsikao.
Ny mifidy ny tsy hanao na inona na inona dia midika fotsiny fa handray fanapahan-kevitra ho anao amin'ny hery manosika ivelany anao.
Ataovy izay hahatanteraka ny zavatra izay mila ataonao faran'izay haingana araka izay azo atao mba hamafana anao amin'ny sainao ary hifindranao amin'ireo zavatra manan-danja kokoa.
Fijerena tsotra ny famokarana izay azonao ampiasaina dieny izao dia ny “Fitsipika Dimy Minitra.”
Raha azo atao ao anatin'ny dimy minitra dia ataovy tsara fotsiny ilay zavatra avy eo ary tsy ho eo amin'ny lalanao mandrakizay izany.
Aza miandry hatramin'ny ora farany. Raha manao izany ianao dia hanery anao hidina amin'ny làlana tsy tianao haleha ny fiainana.
Mahereza . Vitao izay tokony ho vitanao raha vantany vao vita izany.
ohatrinona ny vidin-tsigara greg
3. Milamina. Ny fandaminana dia ampahany lehibe amin'ny fahombiazana.
Nahoana no tena zava-dehibe ny fandaminana?
Eny, raha te-hanangana zavatra misy akora sy kalitao ianao, dia mila fotoana sy làlana.
Zava-dehibe amin'ny fandaminana ny fandaminana ary avy eo fanatanterahana izany drafitra izany.
Andao lazaina fa te hanangana trano ianao. Tsy tianao ny hisehoan'ny herinaratrao hametraka jiro alohan'ny handorohan'ny mpiasa ny fototra, sa tsy izany?
Ny fikambanana koa dia mifamatotra amin'ny fiainana fiainana mavitrika.
Amin'ny alàlan'ny fandaminana sy ny laharam-pahamehana no ahafahanao manomana inona mila vita ary rahoviana (raha tsy zavatra mila fikirakirana eo noho eo izany).
Angamba zavatra tokony hiatrehanao amin'ny herinandro io.
Angamba manana fe-potoana farany iray volana ianao.
Angamba mila manao ireo famandrihan-toerana ireo ianao telo volana manomboka izao.
Mitadiava fomba fandaminana mety aminao, na ny fitazonana ny zavatra milamina tsara na ny fanakorontanana ny korontana satria fantatrao fa navelanao ny faktiora tokony aloa eo amin'ny antontam-bato satria eo no nametrahanao ny faktiora hatrany!
Tsy mila miaina amin'ny fahadiovan'ny klinika ianao mba hijinja ny tombony azo avy amin'ny fandaminana.
4. Mametraha tanjona fohy, antonony ary maharitra.
Ny fahaizana mametraka tanjona dia afaka mitarika anao any amin'izay tianao hahatongavanao amin'ny fiainanao.
Misy karazana tanjona maro amin'ny fiainana, fa izy rehetra dia azo zaraina ho sokajy telo.
Ny tanjona lavitra dia manome ny toerana halehanao.
Tanjona antonony manampy anao handrefy ny fandrosoana sy hahatsapa ny sampahon'ny tanjona fohy izay efa nolavinao.
Ary ny tanjona lavitra dia ny dian-tongotra tsirairay izay mitondra anao amin'ny dianao hahatratra ny tanjonao sy ny fahombiazanao maharitra.
Tsy mila dingana sarotra ny fametrahana tanjona…
Ny hany mila ataonao dia misafidy tanjona iray maharitra ary avy eo avereno injeniera ny fomba hahatratraranao izany tanjona izany.
Ny Internet dia tsara amin'ny fanaovana an'io fikarohana io satria azonao atao ny mianatra amin'ny olona efa nahavita an'io zavatra io ihany:
Aiza no azonao atomboka?
Inona no mila ataonao mba hahatongavana amin'izany tanjona izany?
Inona avy ireo fandrika mety hitranga amin'ny fanatanterahana izany tanjona izany?
Inona avy ireo karazana loharano sy fahalalana ilainao hanatanterahana izany tanjona izany?
Aiza no ahitanao ireo loharano sy fahalalana ireo?
Ny olona sasany dia maniry ny hamotika ny tanjony ho lasa fotoana kely…
Inona no tadiaviko amin'ny fiainako ao anatin'ny enim-bolana? Herintaona? Dimy taona? Folo taona? Ahoana no fomba hahatratrarako izany tanjona izany ao anatin'io fe-potoana io?
5. Atsaharo ny fiainanao ireo olona misy poizina.
“Ianao no salan'isa amin'ireo olona dimy andanianao fotoana betsaka.”
Ity teny ity dia manondro ny fiantraikan'ny olona manodidina antsika amin'ny fiainantsika.
Fa lasa lalina kokoa noho izany.
Sarotra ny mitazona toe-tsaina tsara ary mifantoka hatrany amin'ny tanjonao raha manodidina anao ianao mangidy , olona maneso.
Sarotra ny mandroso raha toa ka manambany anao na amin'ny ezaka ataonao ireo olona manodidina anao.
Tsy midika izany fa mila manapaka ny fifandraisana amin'ny olona rehetra tsy mitovy hevitra aminao ianao.
Ny teny hoe 'misy poizina' dia atsipy lavitra be loatra, indrindra amin'ireo olona izay mety milaza zavatra tokony holazaina, saingy tsy izay no henoinao.
Ny olona iray misy poizina marina dia olona iray izay manisy ratsy ny fiadananao.
Izany dia mety ho ezaka fikajiana, fa matetika kokoa noho izany, dia olona rendrika mafy amin'ny olan'izy ireo na ny tsy fombany ka manimba ny olona manodidina azy.
Zava-dehibe ny hatsaram-panahy sy ny fahatakarana indraindray.
Zava-dehibe ihany koa ny fananana fetra tsara eo amin'ny fifandraisanareo mba hahazoana antoka fa tsy mahasosotra ny fiainanao sy ny fahasambaranao ny olona misy poizina.
6. Karakarao tsara ny fahasalamanao ara-batana.
Ny ankamaroan'ny olona dia afaka mijoro hikarakara tsara ny fahasalamany ara-batana.
Ny sakafo ara-pahasalamana, ny torimaso ampy ary ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia afaka manome tombony lehibe amin'ny fahatsapana ny fahasalamana, ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pientanam-po.
Inona moa no maha sarotra ny fahatsapana tsara momba ny fiainana sy ny tena raha mahatsiaro ho torotoro sy malemy ianao.
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny olona iray dia tsy mila miaina fomba fiainana iray tena lafo be sy voajanahary mba hahazoana ny sasany amin'ireo tombontsoa ireo.
Ny dingana kely, toy ny famerana ny siramamy sy kafeinina, dia afaka manatsara ny haavon'ny angovo ankapobenyo, manampy anao hatory amin'ny alina , ary ento any amin'ny toerana mahasalama kokoa ny vatanao.
Misy karazan-tsakafo voahodina izay feno siramamy voadio izay misy fiatraikany ratsy eo amin'ny vatanao.
Manokàna fotoana amin'ny andronao hanaovana fanatanjahan-tena. Na dia mandeha an-tongotra 20 minitra aza indraindray isan-kerinandro dia manome tombony maromaro amin'ny famokarana simika anatiny, ny fahasalaman'ny fo ary ny fahasalaman'ny ati-doha.
Ny fanatanjahan-tena koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso, izay manivana ho tombontsoa tsara ho an'ny fahasalamanao ara-batana sy ara-tsaina.
7. Manaova zavatra bebe kokoa mifanaraka amin'ny filanao.
Mila endrika fitiavana ny olona sasany amin'ny fiainany.
Ary ny fomba tsara indrindra ahazoana ny sasany amin'izany fientanam-po izany dia ny manamboatra izay tena mampirongatra ny afoo sy manao zavatra betsaka kokoa.
Eny, zava-dehibe ny fahaizana mamelona ny tenanao sy miaina ny fiainanao.
Saingy misy mpanakanto ao amintsika tsirairay avy, maniry fatratra ny famoronana, ny fanentanana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina ary ny hamoronana.
Angamba ianao afaka mahita fahafaham-po amin'ny asanao na amin'ny asanao, na mety tsy vitanao.
Raha tsy azonao ny toerana hahitana azy dia manontania fotsiny hoe:
Inona no tianao atao?
Manao an'io ve ianao?
Ataonao ampy ve izany?
Manantena an'izany ve ianao?
Raha tsy ataonao izany dia maninona no tsy ataonao intsony?
Nisy olona tsy tsara fanahy taminao momba ny zavatra iray tianao indrindra?
Fotoana hanombohana tsy hiraharaha an'io poizina io ary hanaiky ny fitiavanao. Mamorona ilay zavatra, milalao ny fanatanjahantena, vakio ny boky!
Ataovy bebe kokoa izay zavatra mety handoro izany!
Tena zava-dehibe amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po ny mampifandanja ny asanao amin'ny lalao mety.
Raha tsy izany dia miakatra fotsiny ianao mandoro ny tenanao ary manana fahasahiranana bebe kokoa rehefa tena tonga ny fotoana hanaovana asa bebe kokoa.
Tsy maimay amin'izay? Tsy mahatadidy inona no tianao? Misafidiana zavatra mahaliana anao ary andramo vetivety!
8. Miasà handinika, hahatakatra tsara kokoa ary hanaiky hoe iza ianao.
Goavana izany, sa tsy izany?
Ny fahatakarana tena, avelao ny fanekena ny tenanao, dia matetika dia lavitra amin'ny famoahana eritreritra, fahatsapana ary hevitra sarotra momba ny tena.
Ny dia fitiavan'ny tena sy ny fanekena dia zava-dehibe rehetra.
Ny fahafahanao mifoha maraina sy mitia ny maha-ianao anao, izay entinao eo ambony latabatra ary miaina ny fiainanao amin'ny maha-itokisanao anao dia zavatra matanjaka izay afaka manampy anao hitarika anao amin'izay tianao haleha.
Izany dia mifamatotra amin'ny fahitana ny filanao ary manokatra ny lehibe indrindra ianareo izay mety halevina tokoa amin'ny faharatsian'ny olona hafa na ny tsy firaharahiany an'izao tontolo izao.
Ary izany no antony ilanao fotoana fantaro ny tenanao .
Mila mandinika tsara ny soson'ireo zavatra ireo ianao mba hahalalanao hoe iza marina ianao ary maninona ianao no olona toa izany.
Masiaka ny fiainana. Tsy rariny foana ny fiainana . Be dia be zava-dratsy mitranga ho an'ny olona tsy mendrika izany ary ireo traikefa ireo dia hamela ny marika.
Saingy ireo fiainana ratsy ireo dia tsy ny maha-olona anao.
Izy ireo dia ampahany aminao, ampahany aminao izay tokony ho azonao sy ekena… fa tsy izy ireo ianao.
9. Atsaharo ny fanenjehana ny fahasambarana ivelany sy ny fanamarinana. Mampihatra fankasitrahana.
Manenjika fahasambarana ivelany ary fankatoavana dia toy ny mihazakazaka eo ambony fitoeran-kilaometatra mba hanandrana hisambotra ilay karaoty izay mihantona eo alohany.
Hazakazaka tsy miova izay mandeha mankaiza.
Satria ny fahasambarana izay enjehintsika amin'ny endrika zavatra ivelany dia tsy fahasambarana marina.
Ny zavatra enjehintsika rehefa mividy ilay zavatra vaovao isika, mametraka ny zavatra ao amin'ny vatantsika, na mitady ny fahafinaretana ivelany dia fatra endorphins sy dopamine vetivety.
Raha mba nanana an'ity aho dia ho faly.
Raha mba nanana izany aho, dia ho faly.
Angamba mandritra ny fotoana kelikely…
Fa na ho ela na ho haingana dia ho tofoka amin'ilay zavatra ianao ary avy eo manomboka mitady fitomboan'ny fahatsapana akora simika tsara ao amin'ny ati-doha.
Izy io dia manidy antsika anaty krizy ratsy amin'ny fikatsahana zavatra hahazoana fananana satria heverinay fa izany zavatra izany no hahasambatra antsika…
… Fa tsy hanao izany.
Tsy midika izany fa ny vola sy ny zavatra tsy afaka manome fahasambarana. Ny mieritreritra raha tsy izany dia mampihomehy fotsiny.
Tsy faly ny olona sasany satria tsy afaka miaina na mahazo ny fanampiana ilainy.
Ary azo takarina izany satria tsy mividy entana fotsiny mba hividianana entana ary ho faly.
Ny fahafaha-mitantana sy miaina ny fiainanao, izay tokony ho tanjon'ny tsirairay.
Tsy hahita fahasambarana ianao amin'ny fanenjehana azy ivelany.
Ny fahasambarana dia zavatra mangina sy milamina. Zavatra hitanao izany rehefa manomboka tsy maninona ianao sy ny toerana misy anao amin'izay anananao.
Tsy midika izany fa tsy tokony hiezaka bebe kokoa ianao. Aza variana fotsiny amin'ny fandriky ny fieritreretana fa ny zavatra hampifaly anao.
10. Manaova hetsika. Manaova zavatra.
Fantatrao izay ratsy kokoa noho ny tsy fahombiazana?
Ny tsy fanaovana na inona na inona dia manome antoka fa tsy hahomby amin'ny zavatra tianao hotratrarina.
Amin'ny lafiny rehetra, mandania fotoana kely handaminana sy handinihana ny lalanao, fa avy eo mivoaha any ary manaova zavatra.
Betsaka loatra ny olona mandany fotoana be loatra amin'ny fanaintainana kely amin'ny antsipiriany kely mba hanandramana ny fehin-kevitr'izy ireo.
Ny ataon'izy ireo dia ny fandaniam-poana fotoana lafo amin'ny entam-barotra izay tsy azonao.
Raha vantany vao lasa izy dia tsy eo intsony.
Ka manaova zavatra.
Ary eny, tsy hahomby amin'ny sasany amin'ireny ianao. Tsy azo ihodivirana ny tsy fahombiazana.
Azonao atao ny misafidy ny hatahotra izany ary hijery azy io ho fijanonana lehibe sy mahery vaika, na afaka misafidy ny hijery ny tsy fahombiazana ho toy ny dingana eo amin'ny lalan'ny fahombiazana.
Amin'ny fanandramana sy tsy fahombiazana dia mianatra zavatra tsy mandeha ianao, izay ahafahanao manatsara ny fomba fiasao ary manangana ny paikadinao.
Ankoatr'izay dia mianatra ianao rehefa tonga any ary manao zavatra.
Ny traikefa mivantana dia mety ho mpampianatra mahay.
Aza matahotra ny tsy fahombiazana. Avadiho io tahotra io ho antony manosika hahomby.
Ary aza avela hanilika anao tsy hanenjika izay tadiavinao amin'ny fiainana ny hevitra tsy fahombiazana.
Imbetsaka ny zavatra tsy mandeha araka ny kasainaina, ary tsy maninona. Tsy midika izany fa tsy afaka mandeha tsara izy ireo na ny fihemorana no fiafaran'ny fandrosoanao.
Tsy misy farany raha mbola mivoaka any ianao ary manandrana hatrany.
11. Manemotra ny fahafaham-po.
Tsara ny fahafinaretana anio, fa raha midika izany fa tokony hahafoy ny nofinao amin'ny ho avy ianao dia tsy mendrika izany velively.
Indraindray ianao dia tsy maintsy manohitra ny fiara mandeha ho azy mba hampitombo ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao amin'ny fahalalana fa ny fanaovana izany dia hanosika anao hanakaiky ny fiainana anananao tena maniry
Midika izany fa ny fametrahana vola mandritra ny andro manaraka dia tsy ny fandanianao amin'ny zavatra mety hahazoanao fahafinaretana vetivety amin'izao.
Raha tokony hisotro bebe kokoa noho ny tokony ho izy ianao amin'ny zoma alina dia afaka mifangaro zava-pisotro mahery ianao mba hahafahanao miasa sy mankafy ny asabotsy anao.
Ny fandavana ny hetsika ara-tsosialy mba hianarana mafy ho an'ny fanadinana ho avy dia manome anao ny vintana tsara indrindra hahazoana marika tsara.
Ny fialana amin'izao fotoana izao dia mety hitarika ho amin'ny fotoana tsara kokoa any aoriana.
Tsara ny mitadidy fa amin'ny manaraka ianao mahatsapa faniriana hametraka fahafinaretana vetivety alohan'ny fahasambarana maharitra.
12. Mametraha fahazarana mahomby.
Ireo zavatra ataonao isan'andro tsy mila mieritreritra momba azy - izany no fanaonao.
Fa inona no misy azy io ankehitriny?
Ary manampy anao hifanaraka amin'ny fiainanao ve ireo zavatra ireo?
Ny fahazarana tsara dia iray izay miatrika ny asa kely rehetra nefa ilaina isan'andro.
Ny fanaovana ireo zavatra ireo amin'ny fomba mahomby ary tsy misy tsy fahombiazana dia midika fa tsy mampiorina sy mandanja ny sainao izany.
Ny fahazarana iray dia manaisotra ny faneriterena ao an-tsainao. Raha tokony hisalasala momba izay tokony hatao ianao dia fantatrao fotsiny satria ataonao foana amin'ny fotoana sasany na amin'ny andro sasany izany.
Azonao atao ny mamaritra ny alarobia alina sy ny asabotsy maraina toy ny fotoanan'ny fanasan-damba.
Ny alahady tolakandro dia mety ho fanarahana ny fifanarahana rehetra sy ny fitantanana ny fiainanao manokana toy ny fanavaozana ny fiantohana na ny fanaovana drafitra fitsangatsanganana.
Ny fahazarana mahomby dia mitazona ny fiainanao milamina ary manao izany tsy misy ezaka fanampiny be loatra avy aminao.
13. Eritrereto tsara ny fanapahan-kevitrao.
Manapa-kevitra an-jatony, angamba an'arivony isan-kerinandro ianao.
Ny sasany lehibe, ny maro kely.
Saingy mety hisy fiatraikany amin'ny fomba fiainanao ireo fanapahan-kevitra ireo.
Ny fanapahan-kevitra raisinao tsirairay dia misy valiny. Ary io vokatra io dia mety hahasoa anao na tsia.
Raha ny fanapahan-kevitra tena lehibe eo amin'ny fiainana no resahina, dia aza maika.
Makà fotoana handanjalanjana ireo safidy isan-karazany, ny lafy tsara sy ny ratsy avy amin'ny tsirairay, mba hahafahanao misafidy araka izay tratra.
Hamarino tsara fa mieritreritra mitsikera momba ny fampahalalana mifandraika amin'ny fanapahan-kevitra. Aza raisina an-jambany fotsiny ny torohevitry ny hafa satria mieritreritra ianao fa fantany izay lazainy.
Izany dia nilaza fa rehefa avy nandinika tsara ny safidy rehetra ianao dia manapaha hevitra. Aza variana amin'ny paralysisa famakafakana.
Ny fanatsarana ny fahaizanao manapa-kevitra dia mety hitarika anao amin'ny làlana marina.
14. Manosika ny tenanao.
Mety hihevitra ny tenanao ho miasa mafy ianao, saingy matetika dia misy tahiry ao amin'ny tankinao izay azo ampiasaina tsara.
Na dia mety tsy vahaolana maharitra amin'ny olanao aza izany, indraindray dia afaka mandany ora maromaro fotsiny ianao hamitaana ny raharaha.
Na mangataka ora fanampiny ianao na manomboka hustle lafiny mba hivoahana amin'ny lavaka famatsiam-bola sarotra, na mandany ny faran'ny herinandro fanavaozana ny fandroana fidiovana izay tsy mety amin'ny tanjona, dia ho gaga ianao fa afaka manosika tena.
Mety tsy tsapanao izany, fa olona mahatanty ianao ka afaka miaritra ny fahasahiranana ara-batana sy ara-tsaina izay takiana indraindray hahavitana zavatra.
15. Mikendry fandrosoana fa tsy fahalavorariana.
Tsy afaka manantena ny fiainanao handeha avy amin'ny ankehitriny ianao amin'ny fisianao nofinofy ao anaty indray mipy maso.
Raha ny tena izy, io nofy io dia mety hijanona ho nofinofy foana satria mety ho lavorary amin'ny antsipiriany kely rehetra ary tsy tonga lafatra ny tena tontolo.
Aleo mifantoka amin'ny fanaovana fandrosoana amin'ireo zavatra manandanja indrindra mba hahafahan'ny fiainanao mihatsara tsimoramora mandra-pahatongany any amin'ny toerana ankafiziny na tsy dia ankafiziny matetika.
Raha ratsy ny raharaha dieny izao dia mikendry ny hanao azy ireo tsara aloha.
Manomboka amin'ny okay, andramo ny manara-penitra. Avy eo mankany amin'ny tsara. Avy eo mankany amin'ny lehibe.
Raha afaka mahazo tsara ianao dia manao tsara kokoa noho ny 99% amin'ny mponina.
Ampiasao io fomba io amin'ny lafiny lehibe tsirairay amin'ny fiainanao.
Miezaha manatsara kely ny toe-javatra iasanao isaky ny mandeha.
Raiso tsikelikely ny tanjon'ny fahasalamanao fa aza maika azy.
Ataovy ireo zavatra madinidinika izay mety hahatonga ny fifandraisanao manokana ho faly sy mahasalama kokoa.
Tohizo hatrany ny firosoana mandroso raha azo atao. Rehefa miatrika fihemorana ianao (ary mety) dia miverena fotsiny amin'ireo zavatra afaka manatsara ny toe-javatra ary mifantoka amin'ireo.
16. Mifantoha amin'ny fifehezana ny fototra.
Miaraka amin'ny zavatra maro, ny fahazoana ny fotony marina dia 90% amin'ny asa. Aorian'izay vao tokony hanahy ny amin'ny antsipiriany tsara kokoa izay ahazoanao 10% fanampiny ianao.
Raha manantena ny hihena kely ianao dia aza manahy momba ny fifandanjan'ny gliosida, tavy ary siramamy ao anaty sakafo, mifantoka fotsiny amin'ny fanaraha-maso ny haben'ny anjaranao.
Raha te ho tonga mpiara-miasa tsaratsara kokoa amin'ny olon-tianao ianao dia hadinoy ireo fanomezana lafo vidy sy fanehoam-pitiavana be loatra ary alao antoka fa manao fanajana amin'ny fotoana rehetra ianao.
Ny ankamaroan'ny zavatra amin'ny fiainana dia manana fototra izay zava-dehibe mba hahitsy. Toy ny rafitra rehetra, ireo dia manome ny fototra mafy orina sy maharitra izay ahafahanao manangana ho avy tsara.
Tsy hanandrana manendy patisserie mahafinaritra ianao raha tsy mahafehy mofo iray voalohany. Toy izany koa amin'ny faritra hafa amin'ny fiainana.
17. Miasà hiatrika sy handresy ireo tahotrao.
Inona no manakana anao tsy hiaraka amin'ny fiainanao?
Ny valiny iray mety hitranga dia ny tahotra.
Ny tahotra dia iray amin'ireo sakana lehibe indrindra amin'ny fahazoana ny valiny irintsika amin'ny ezaka rehetra atao.
Ary amin'ny fiainana, ny tahotra dia zavatra mety hanakana anao tsy handray ny hetsika ilaina amin'ny fanatsarana ny toe-javatra misy anao.
Inona no atahoranao? Mandany fotoana kely ao tena-taratra ary manao ny marina tanteraka amin'ny tenanao.
Raha vantany vao hitanao ny tahotrao fototra, ny lakileny dia ny tsy manandrana manala ny tenanao amin'izy ireo tanteraka, fa kosa mandroso na eo aza izany.
Ny tahotra dia tsy tahotra. Miatrika ny tahotra izany ary mihetsika ihany.
Amin'ny farany, raha afaka manohy mandray andraikitra ianao na inona na inona tahotra mety ho tsapanao, hihena izany tahotra izany.
Tsy handeha tanteraka izy io, fa hahatsapa ho voafehifehy kokoa.
18. Ankalazao ny fandresenao.
Isaky ny mahavita mandresy vato misakana iray ianao, miatrika tahotra, na manao zavatra vita fotsiny izay mila atao dia omeo tampoka ny lamosinao.
Raiso am-po ny valisoa kely izay ampy fotsiny nefa tsy mihoa-bolo loatra.
SY mirehareha amin'ny tenanao ho an'ireo dingana noraisinao hanatsarana ny fiainanao.
Jereo ny zava-bita ho zavatra mendrika fankalazana satria na ny asa kely indrindra aza dia iray izay afaka manosika ny fanjaitra amin'ny fiainanao mankany amin'ny lalana tsara.
19. Mangataha fanampiana.
Ny zavatra sasany dia ho sarotra amin'ny olona iray ny mitantana irery.
Fa asio olona roa na maromaro hiara-hamaha olana iray na hiatrika asa iray ary mety hisy vokany tsara kokoa izany.
Aza matahotra àry mangataka vonjy rehefa ilainao izany.
Mety ho hitanao fa maro ny olona faly manolo-tanana olona manampy azy ireo.
Ary raha tsy misy olona afaka manampy amin'ny zavatra manokana, dia mety misy fikambanana afaka manohana anao.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fangatahana vonjy dia tsy mahatonga anao ho malemy ary tsy hahatonga anao ho enta-mavesatra izany. Mila fanampiana kely isika rehetra indraindray.
20. Mangataha valiny.
Ny zavatra iray hafa azonao angatahina dia ny hevitrao momba ny zavatra nataonao mba hanatsaranao ny fomba fanaovanao izany zavatra izany amin'ny ho avy.
Rehefa dinihina tokoa, ianao dia mety tsy ho afaka mahita zavatra mitombina toy ny antoko fahatelo. Mety ho hitan'izy ireo ny faritra ahafahanao manova ny fomba fiasao hanomezana anao vokatra tsara kokoa.
Raiso ny dinidinika momba ny asa, ohatra. Rehefa tsy mahomby ianao amin'ny fahazoana ilay andraikitra natolotra dia azonao atao ny manontany amin'ny mpampiasa raha misy zavatra manokana mety hiasanao.
Ity dia afaka manampy anao hiomana amin'ny dinidinika amin'ny ho avy ary hanome anao vintana ambony kokoa hiarovana ny asa.
Azonao atao koa ny manontany an'ireo izay ao amin'ny fifandraisanao manokana hoe inona no azonao atao mba ho namana, mpiara-miasa na ray aman-dreny na mpiray tampo aminao.
Aza hadino ny mihaino azy ireo ary misokatra amin'ny fitsikerana mahasoa rehetra afaka manome izy ireo.
21. Atsaharo ny maka zavatra manokana.
Zava-misy eo amin'ny fiainana ny zava-dratsy mahazo ny olona tsara.
Tsy voatery hitaratra hoe iza ianao amin'ny maha olona anao na izay antenainao amin'ny ho avy.
Toy izany koa, ny hevitry ny olona iray momba anao dia tsy fahamarinana izay tokony hinoanao ary horaisinao am-po.
Misy olona tsy ho tia anao ary mety hanao na hiteny zavatra handratra anao aza izy ireo, saingy tsy tokony hanaiky izany fihetsika izany ho zavatra mendrika ianao.
Ny olana dia matetika azy ireo ary ny fihetsik'izy ireo dia taratry ny maha olona azy fa tsy ianao.
Etsy ankilany, ny mahatezitra ny zavatra kely rehetra lazain'ny olona iray na ataony - na dia tsy misy fikasana ratsy aza - dia mandany ny fotoananao sy ny herinao.
Raha mahatsapa ianao fa toa iharan'ny fanafihana tsy tapaka, dia ho be atao ianao manandrana miaro tena mba hitondra ny fiainanao amin'ny lalana tsara kokoa.
22. Mahaiza mitandrina.
Raha tsy miaina mifanaraka amin'ny anananao ianao ary mikasa ny amin'ny filan'ny ara-bola amin'ny ho avy dia hiatrika zava-tsarotra ianao na ho ela na ho haingana.
Ny fialan-tsasatra dia tsy midika hoe mandà ny tenanao amin'ny fahafinaretana tsotra rehetra amin'ny fiainana, fa kosa midika hoe misafidy hoe rahoviana ianao no haneho famerana.
Midika ho fanaovana teti-bola am-pitandremana mba hahazoana antoka fa izay mivoaka tsy mihoatra ny miditra.
Midika izany hoe mamantatra ireo faritra ahafahanao mampihena ny fako tsy andoavam-bola.
Midika izany ny fampiasana feno ireo zavatra efa anananao fa tsy mividy zava-baovao amin'ny asa iray ihany.
Ny fitsitsiana dia zavatra mety hanompo anao tsara na inona na inona volanao. Izy io dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fihenjanana mety misy raha tery ny vola.
23. Atsimbadika ny tantara an-tsehatrao.
Ny fiainana dia manana fotoam-pahatoniana sy milamina, saingy misy ihany koa fotoana izay manaparitahan'ny olona izany fihavanana izany amin'ny famoronana tantara an-tsehatra izay tsy nisy.
Ny drama dia mandany ny fotoanao sy ny herinao. Rehefa mieritreritra na miatrika olana manokana an'ny hafa ianao dia tsy mifantoka amin'ny fandaminana ny fiainanao manokana.
Raha afaka ianao esory amin'ny fiainanao ny ankamaroan'ny tantara an-tsehatra raha mandà tsy hiditra an-tsehatra fotsiny ianao dia ho afaka hikirakira ireo zavatra izay mety hanatsara ny toe-javatra misy anao.
Aza manome ny hevitrao raha tsy hoe nangataka manokana azy ireo. Aza miditra amin'ny fifanolanana ataon'ny hafa. Aza matahotra ny hitazona ny halaviranao amin'ireo olona feno fiainana tantara an-tsehatra ny fiainany.
24. Mametraha fetra.
Amin'ny fanamarihana mitovy amin'izany dia tokony mametraka fetra mazava miaraka amin'ireo olona amin'ny fiainanao sy ao an-tsainao manokana mba hahafahanao misoroka ny fanintona anao amin'ireo zavatra tsy mahasoa anao.
Mianara mandà ny olona sy ny fotoana mety tsy mifanaraka amin'ny tanjona hampifanaraka ny fiainanao.
Safidio tsara ny olona ampianao sy izay ampianao.
Mazava ho azy fa tsara ny manome tanana olona tiana izay tena mila ny fanampianao, nefa alao antoka fa tsy manararaotra anao ny olona.
Raha misy olona miankina aminao manampy betsaka azy ireo amin'ny fiainany dia anontanio raha tena afaka mandany an'io fotoana io aminy ianao fa tsy aminao.
Tsy fitiavan-tena ny mametraka ny filanao manokana aloha.
Amin'ny farany, mety ho ampy fitaovana kokoa ianao manampy ny hafa raha vao milamina kokoa amin'ny fiainanao ny zavatra.
25. Jereo izay manosika anao.
Ny antony manosika dia manampy anao handroso handray andraikitra tsara sy hanatsara ny fiainanao.
Fa misy maro karazana antony manosika ary tsy hiasa ho anao daholo izy rehetra.
Ny fandaniana fotoana hahitana izay tena manome hery anao hanao zavatra dia hahafahanao manao zavatra bebe kokoa.
Angamba ianao mahatsiaro ho mazoto indrindra rehefa ampahany amin'ny vondron'olona izay miasa amin'ny zavatra mitovy amin'izany. Olona manohana ary mifampahereza hahatratra ny tanjon'izy ireo.
Na mety entanin'ny tena fanaovana ireo asa ianao sy ny fahatsapana azonao rehefa mahavita zavatra iray ianao.
Na inona na inona manosika anao, mianara mampiasa azy mba hahafahanao manohy mandeha rehefa simba ny hafanam-ponao.
26. Miaina indray andro isan'andro.
Tsy azo ovaina intsony izay nataonao omaly. Amin'ny lafiny maro, tsy dia misy dikany firy izao.
Ny mety hataonao rahampitso dia maninona, fa ny manjo indrindra no manandanja indrindra rehefa ny ampitso no anaovanao izany.
Androany no andro tena manisa.
Ka aza mieritreritra ny amin'ny lasa na miomana am-pitandremana amin'ny ho avy, fa aza mijanona amin'ny fotoana azonao atao anio, amin'izao fotoana izao.
Inona no azonao atao anio hamerina ny fiainanao amin'ny làlana tsara kokoa? Inona no azonao atao hiasa izay mila iasaina? Inona no asa azonao atao, inona ny sakana azonao iatrehana?
Ny fandaminana rahampitso dia mety ho ny zavatra mila atao androany, kanefa na dia izany aza dia tokony hifantoka amin'ny famitana ireo drafitra ireo ianao.
ny olombelona dia mamaky ny helo ao anaty sela iray
Aza variana amin'ny antsipiriany be loatra fa ny hetsika rahampitso dia mihemotra mandra-pahatongan'ny andro manaraka ary avy eo ny manaraka mandra-pahatonga azy tsy vita mihitsy.
27. Mijanona ho tony mandritra ny fihemorana.
Rehefa tsy eo amin'ny toerana tianao ny fiainanao dia mila mitady fomba hamindrana azy amin'ny toerana tianao ianao.
Ity dia ity dia hahitana fihemorana. Tsy azo ihodivirana izany.
Ny lakileny dia ny fitazonana ny milaminao mandritra ireo dingana mihemotra ireo ary tsy avelany hanelingelina anao tanteraka.
Eny, hisy fanaintainana sy tsy fahazoana aina mifandraika amin'ireo fihemorana ireo, fa raha afaka mifantoka amin'ny hetsika azonao atao ianao hanosehana azy ireo, dia vetivety izany.
Raiso izy ireo ho toy ny fotoana hizaha toetra ny fanapahan-kevitrao. Ary raha vao nandalo izy ireo, dia miverena mijery azy ireo toy ny fotoana nanehoanao toetra sy fikirizana.
28. Fantaro ny antony sy ny vokany.
Rehefa mandray andraikitra ianao na manapa-kevitra dia apetrakao ny zavatra hitarika ny vokany.
Zava-dehibe ny fahafantaranao an'ity rohy ity eo anelanelan'ny zavatra ataonao sy izay mitranga amin'ny fiainanao.
Ilaina amin'ny fomba roa izy io.
Voalohany, manampy anao hahita ny fotoana mety hahatonga ny vokany ratsy amin'ny vokatra ratsy. Raha mieritreritra ianao fa mety izany dia azonao atao ny misafidy ny tsy hanao izany na mitandrina mba tsy ho tratry ny loza.
Faharoa, mamela anao haminavina ny vokatra tsara azo amin'ny zavatra nataonao. Ity fahalalana fandresena mety ho avy ity dia mety ho hery manosika manosika anao hanao izany hetsika izany.
Aza mandeha an-jambany amin'ny fiainana, tsy fantatrao izay halehanao. Sokafy ny masonao mba hahitanao ny làlana alehan'ny fihetsikao.
Avy eo manapa-kevitra raha te-hijanona amin'io lalana io ianao na mitady fomba hafa.
29. Ho tompon'andraikitra amin'ireo zavatra nolazainao.
Rehefa manaiky ny anjara asanao amin'ny fomban'ny fiainanao ianao dia manome hery ny tenanao hisafidy hendry kokoa.
Saingy tsy hanao ny safidy mety ianao isaky ny mandeha. Raha ny marina dia hisy ny fotoana manodinkodina ny sainao na ny faneren'ny olona hafa anao handray fanapahan-kevitra ratsy.
Rehefa mitranga izany, raiso ny andraikitrao amin'ireo fihetsika ireo ary mianara aminy.
Aza manome tsiny ny hafa noho ny lesoka nataonao na miezaha hanena kely ny anjara birikinao tamin'izy ireo.
Ny zaza iray dia mianatra manao ny zavatra tena fototra fanaon'ny olona amin'ny alàlan'ny fitsapana sy fahadisoana. Manao siansa lehibe ny mpahay siansa amin'ny alàlan'ny fandisoana zavatra ary amin'ny fanandramana fomba hafa.
Ny fanekena fa nanao safidy ratsy ianao no dingana voalohany mankany amin'ny fanaovana safidy tsara kokoa amin'ny manaraka.
Raha tsy mianatra amin'ny hadisoanao ianao, dia voaozona hamerina azy ireo.
30. Avelao ireo zavatra tsy azonao fehezina.
Raha manana ny filazanao zavatra maro manjo anao ianao, dia misy hery tsy voafehinao ka mety hiteraka toe-javatra ratsy.
Na dia mety tsy mahafinaritra aza ireo zavatra ireo dia aza avela hifikitra mafy aminy ny sainao.
Raha mipetraka ao anaty alahelo na fahatezerana ianao amin'ireo zava-dratsy mitranga na eo aza ny fikasana tsara dia manomboka tsy mahita ny herinao manokana ianao.
Izany dia mety hiteraka toe-tsaina iharam-pahavoazana izay mamela anao hahatsapa fa tsy afaka mamorona fiainana tsaratsara kokoa ho anao.
Miezaha kosa hanaiky fa nisy zavatra nitranga izay tsy nirianao hitranga ary misy kely ny zavatra azonao natao mba hampijanonana azy.
Avelao ny lolom-po rehetra ary avereno amin'ny saina mifehy ireo zavatra azonao fehezina.
Eto no mipetraka ny herinao. Izany no fomba iarahanareo ny fiainanao indray mandeha.
Mbola tsy azonao antoka hoe ahoana no hampiaraka ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Takelaka kisarisary azo adika maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana + Template Tracker mahazatra
helo amin'ny fotoana fanombohan'ny sela
raha misoloky ny vadinao dia haveriny indray
raiki-pitia aminao aho
ny fomba milalao mafy mba alalan'ny lahatsoratra